Friday March 02, 2018 - 17:15:07 in Wararka by Super Admin
Sawir hore degmada Afgooye
War kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegtay in 80 askari oo Ajaanib kamid yihiin lagu dilay weerar istish-haadi ahaa oo lala eegtay saldhigga ciidamada dowladda Imaaraata Carabta tababartay.
Gaari lagasoo buuxiyay walxaha qarxa oo uu kaxaynayay dagaalyahan Naftiis hure ah ayaa ku qarxay bartamaha saldhigga, qaraxa ayaa sababay in uu gubto saldhigga.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in 7 Baabuur oo isugu jiray kuwa xamuulka iyo kuwa dagaalka ay ku burbureen qaraxa, ciidamada ku dhintay weerarka waxaa kamid ahaa Afar Tababarayaal shisheeye ah oo la sheegay in ay kasoo kala jeedaan Koonfur Afrika iyo Imaaraatka Carabta.
Saraakiisha tababarayaasha ah ee lagu dilay weerarka ayaa qaab calooshood ushaqeystanimo ku joogay dalka Soomaaliya,sidoo kale qaraxa ayaa lala beegsaday gaari Cabdi bile ah oo dhaawacyo kasoo daabulay dhanka Afgooye.
Qaraxa oo ka dhacay deegaanka Siinka dheer ayaa la xaqiijiyay in uu burburiyay gaarigii dhaawaca siday waxaana dhintay dhammaan askartii gaariga la socday kuwii dhaawaca ahaa iyo kuwii gurmadka ahaa intaba.
Ciidamada lagu laayay saldhigga melleteriga degmada Afgooye ayaa isku diyaarinayay in ay gurmad ufidiyaan degmada Balcad oo xilligaas ay qabsanayeen xoogaga Shabaabul Mujaahidiin.
Waa Maalin kale oo dhiig farabadan laga daadiyay ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka Dowladda Federaalka, shalay ayay aheyd markii weerar naf hurnimo uu ka dhacay deegaanka Siinka dheer halkaas oo askar badan lagu dilay.